Izintandokazi uchungechunge TV abadlali. "Ukumiswa" - isampula amakhono
Amagama engomeni edumile Utesova "The Black Sea" ( "Iculo Odessa") bazama kaninginingi abonisa ku ifilimu cishe yonke ifilimu abenzi yasekhaya owake wadubula ifilimu mayelana Odessa. Lokhu okukhethekile engasenathonya, izici ezivelele, futhi indawo eyingqayizivele emhlabeni. Kuphela umqondisi Sergey Ursulyak kwesizathu bakwazi ukugcwalisa uchungechunge "Ukuyeka", layo isikhala kwangaphakathi kanjalo sung Utyosov emoyeni isimanga Odessa ukunambitheka.
Kuhle Ithelevishini izikhathi zokugcina
Creation Ursulyak waqonda njengoba ifilimu agcwele, kuphela isikhathi ezimbalwa side (ubude). Lonke umkhathi, ukuthungwa lelandzisako, ukunakwa emikhulu ukuze imininingwane, futhi okubaluleke - odumile Odessa uhlamvu wenza "ukuvalwa" the best-TV uchungechunge ezikhathini zamuva. Ithelevishini kubangela imizwa ezifana nalezo ezenzeka esikhathini eshaweni ngemuva kokubukela "Umhlangano Indawo ayikwazi ukushintshwa" futhi "Seventeen Moments of Spring" amabhayisikobho, ngisho abanye abagxeki kuqhathaniswa ifilimu Ursulyak ngowokuqala okuthiwa. Kuze kube manje, phakathi Indathane kahle ehloniphekile amafilimu uchungechunge "Ukumiswa" kubonakala idayimane yangempela inqwaba okusuke ezingenakubalwa.
Indaba ifilimu iqala ngo-1946. Agugile Odesa uzama ukungena ekuphileni okuvamile emva ezethusayo seMpi yoMhlaba yesiBili. I protagonist - induna Amacala Obugebengu uMnyango uDavide Gotsman (V. Mashkov) - iqala ukuphenya uchungechunge ubugebengu obenziwa nge-i lezigelekeqe eziyingozi kakhulu ephethwe ukuthi ubuntu kuyivelakancane, emnyama - Academician. Uhlamvu main nezibi, isimo sakhe saba is yashubisa yi Ukufa kabuhlungu komngane wakhe engcono (C Makovetskii), okungadingi ukusinda ngemuva elambulala ngommese.
Ngalesi sikhathi emzini ukuyohlola uhlala kakhulu Marshal Zhukov (Vladimir Menshov), it is usethe ngempela kakhulu futhi sebekubeke abafuna ngenkani amaphoyisa ukuze kubuyiselwe ukuthula e-Odessa. La maphoyisa washayiseka, kodwa abantu bengayeki ukuwohloka kusukela izandla enonya, izimfihlo ziyanda, futhi-ke, abaphathi bakhe ezikhulayo ukunganeliseki protagonist. Ngokuhamba kwesikhathi David eqaphela ukuthi Academician ngoba ngaphambi kwakhe ngaso sonke ukuthi has izixhumanisi imizimba noma yena lapho futhi bakhonze. Ngakho kudingeka ufune phakathi abangane. Ngakho nozungu uqale vzhivshis abadali abadlali esithombeni. "Ukuqedwa" has ukubuka kusuka uzimele wokuqala.
A indima ebalulekile kudlalwa Vladimira Mashkova
Le filimu, kungathi ngaphandle isizotha zamanga, inama umsebenzi omuhle umdlali. Ngokuyinhloko kuyafaneleka umuntu ehamba phambili, ngubani wakhumbuza wonke umuntu ukuthi uyakwazi ukuba yiqhawe isinyathelo wagan 'unwabu movie hhayi kuphela, kodwa nomdlali yangempela ophethe ukuvusa kumbuki umuzwa ukuzibandakanya siqu okwenzekayo esibukweni. Ngakho kumdlali bangaziqhayisa uchungechunge ezifana "Ukumiswa" ngokuphepha. Mashkov singcono kakhulu yena. Umumo Wakhe nginesibindi kakhulu, indoda enamandla, ngubani, ngaphandle flinching, wadabula impi futhi manje ohlangothini umthetho esalwa labo wakhetha indlela nobugebengu.
ukukholwa yikho konke
Ngesikhathi ebuka show bakholwe ngokuphelele yonke abadlali, kusukela protagonists abalingiswa ezincane ababonakala kafushane uzimele. Phela, ochungechungeni TV "Ukumiswa" Makovetskii kuqeda ingoti. Iqhaza Odessa umalalepayipini Fima kwaba ukudlala Andrei Krasko walithumba, kodwana wahlala phezu isethi izinsuku ezintathu kuphela, sabe sesifa. Esikhundleni sakhe ku-TV abamenyiwe Sergey Makovetskiy ukuthi yake achingly mnene, kodwa delightfully olunembile njengoba umngane umlingiswa oyinhloko. Amazwi akhe, ayoliswe Odessa engasenathonya ehlukile, kungaba ukuqaqa ngokuphepha izingcaphuno.
Ingabe cha guba umqondisi nezinye abadlali. "Ukumiswa" presents izilaleli umfanekiso acacile futhi ezimibalabala phakade athukuthele nokuhlupheka le ukufutheka nokungabi nathemba angamambuka - Checa, owadala Konstantin Lavronenko. Futhi onezimfihlo Krechetov udangele, futhi uyaziqhenya Ida, nithande Antonina, kubalwa, ingubo nongenanembeza - ngokuphelele yonke abadlali edlala izindima lezi zinhlamvu, umqondisi ifaniswe kahle ngakhoke ukusebenza okuyinhloko yesehlakalo. Ukubuka kubo ukudlala, uyazi ukuthi zingabantu - ochwepheshe abadlali zangempela. "Ukuqedwa" has Chic ngokuphelele hit ilitshe nge ukhonkolo kanye Ukukhetha ekubunjweni abaculi kuwo wonke ngothi lwawo indima.
Budebuduze ukuba inkathi yangemva kwempi
uchungechunge Namandla S. Ursulyak ezahlukene emangalisayo, simo okunenjongo, esishubile, ethakazelisayo umsebenzi umphenyi ukusondela namaqiniso ngokumangalisayo ukuba inkathi yangemva kwempi. Sibonisa umoya omkhulu: kusukela zihambisane nezinsimbi zomculo, okungadingi ubuhlungu ukulalela, futhi kuqinise bezibona ngokomzwelo ziphethe ukumema ezitaladini omnandi futhi abakhileyo zazo ezimibalabala Odessa. Futhi-ke, abadlali ezinkulu. "Ukumiswa" bangaziqhayisa izinkanyezi eziningi kangaka e Izinhlu kazwelonke cinema umlingisi ekusakazeni.
"INkosi Izindandatho" Gandalf White: umlingisi, izwi
Bender Rodriguez - ubunjalo "Futurama"
Spike Jones ifilimu "It": nabalingisi izindima, indaba, ukugxeka
Iqhaza Biography of Aleksandra Golovina. ukuphila komuntu umlingisi
Dzhozef Morgan: nempilo yakho, Filmography kanye biography. Uhlu amabhayisikobho engcono ne umlingisi
Yokusetshenziswa "Multikan-6" ngoba izinja
Car "Lexus-450": incazelo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Imininingwane yokuthi ungathengisa kanjani izikhali ku-Warfyus
"The Case Eziyinqaba Benjamin Inkinobho." Abadlali, izinhlamvu, indaba yokudalwa
Okuvame kakhulu amaphutha Web-design
Propolis tincture: isicelo nokwelapha izakhiwo
Incazelo kanye nokubekwa ngezigaba ezimpahleni ezingasuki phansi, ukulinganisa.
Humidifiers: 2014-2015, isilinganiso.
Kungenzeka yini ezinsukwini ezibucayi yokudaya izinwele: Izinzuzo nezingozi nebubi
Umlando kwengqondo. Izindlela umlando Psychology